Ugwu ugwu Tambora: njirimara, nguzobe na mmeputa | Netwọk Mgbasa Ozi
Otu ugwu mgbawa mara ka nke stratovolcano ụdị kasị ama na Indonesia n'ihi na ya nnukwu mgbawa ugwu ọrụ bụ Tambora. Ọ bụ otu n'ime ugwu mgbawa nwere ọrụ kachasị elu edere n'ụwa ruo ugbu a. Ọ bụ ya mere eji ewere ya dị ka ugwu mgbawa kachasị dị adị. Iji mụtakwuo banyere ugwu a, anyị ga-enyocha njirimara ya, ntọala ya na mmalite ya, mgbawa ya na mmetụta nke mgbanwe ihu igwe.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmatakwu banyere ugwu ugwu Tambora, nke a bụ ọkwa gị.
2 Nhazi nke ugwu ugwu Tambora
3 Ihe mgbawa ugwu Tambora
Nke a ugwu mgbawa bụ nke otu nke stratovolcanoes. Ọ pụtara na ọ nwere ihe owuwu dị egwu nke mejupụtara nnukwu nnukwu mineral dị ike nke na-agbawa agbawa dịka ihe mgbawa. Ihe ntiwapụ ndị a na-eme site n'oge ruo n'oge, ya mere enwere ike iwere ya dị ka ugwu mgbawa nke na-arụ ọrụ mgbe niile. Otu ihe omuma nke gha eme nnukwu ihe di iche n’ikpebi usoro iwu gi bu ogologo gi. Agbanyeghị na ịdị elu a bụ naanị mita 2.850 karịa elu oke osimiri, ọ bụ ihe dị oke elu ịbụ stratovolcano.
Anyi aghaghi ima na ugwu mgbawa bu udidi ugwu mgbawa na-eme n'ihi ihe di iche iche. Isi na ọtụtụ ihe kpatara ya bụ na ime ụlọ magma na-agbada ma ọ bụ na-agbanwe mgbe ugwu mgbawa dị elu karịa ntọala nwere ike ịkwado. Nke a na-eme klas a nke ugwu mgbawa nwere nnukwu oghere ma ị nwere ike ịhụ ụdị agụụ ma ọ bụrụ na ị si n'elu lee anya.
Akụkọ ahụ gbatịkwuru na amaara na ugwu ugwu Tambora o ruru elu nke 4300 mita karịa elu oké osimiri. Nke a mere ka ewere ya dịka otu n'ime ọnụ ọgụgụ kachasị elu na Indonesia niile na narị afọ XNUMX. Agbanyeghị, ihe a niile gbanwere mgbe ụlọ magma ya jupụtara. Ma ọ bụ na ike ịkọwa ihe a, anyị ga-amalite guzobe ugwu mgbawa.
Nhazi nke ugwu ugwu Tambora
Ugwu a aghọọla ama maka nnukwu ụdị mgbawa dịka ọ dị na mpaghara mpaghara ala ala. Mpaghara subduction bụ otu ebe otu efere na-agbada n'okpuru ọzọ. Anyị maara na ugwu mgbawa dị ihe dị ka ihe dị ka kilomita 340 site na Tren Java na ihe dịka 190 kilomita n'elu mpaghara mpaghara subduction tectonic dị n'okpuru Sumbawa Islands.
Mmeghari nke mbadamba efere ndị ahụ bụ nke kpaliri nrụgide dị ukwuu iji mepụta magma n'ime ụwa. Inwe nnukwu nrụgide a, magma ahụ na-achọ ụzọ. Nke a bụ etu ugwu ọkụ si agbọpụta. E mere atụmatụ na Ihe ochie nke ugwu Tambora bidoro n’ihe dịka afọ 57.000 gara aga nke ahụ wee malite ịmalite site na mmiri nkwụnye mmiri nke na-esiwanye ike. Typedị nhazi a na-abụkarị n'ụdị ugwu mgbawa nke stratovolcano, nke a makwaara dị ka ugwu ugwu.
Ihe dịka afọ 43.000 gara aga, nnukwu caldera kpụrụ nke ruru elu karịa mita 4.000. Ihe a niile mere n'oge mbubreyo Pleistocene epoch ma juputa na mmiri. Mgbe e mesịrị, na mmalite Holocene, e nwere ọtụtụ ihe mgbawa na-agbawa agbazigharị na morphology nke ugwu mgbawa. Mgbawa kachasị ama ama nke ugwu a mere na 1815. A na-eme mkpakọrịta nwoke na nwanyị nke radiocarbon nke mere ka ọ banye na oke nke ihe ndị kachasị mkpa na akụkọ ihe mere eme dum.
Ihe mgbawa ugwu Tambora
Enwere ihe ndekọ nke eruba 7 nke ugwu ugwu, nke kachasị mkpa bụ nke 1815. Akụkọ ihe mere eme nke ugwu mgbawa nke ugwu Tambora Ọ gafere ma ọ dịkarịa ala afọ 50.000. 7 Ekwenyela na nbibi, nke kacha ochie n'ime 3.900 BC. Ma ọ bụ ihe na-erughị ala, a maara na n’agbata otu mgbawa na nke ọzọ na ihe e nwere dị ihe dị ka puku afọ ise. Na mgbawa ọ bụla enwere ọdịiche dị n'agbata ọkwa nke lava na-eme na ike ha.
Ihe omuma ndi ozo amara nke oma ha mere n’afọ 3000 BC, n’afọ 1812, n’afọ 1819, ọ bụ ezie na nke kacha njọ mere n’afọ 1815. Mgbe ugwu ahụ gbawara nkịtị, ogologo oge nke ala ọma jijiji dị iche iche juru ndị bi n’ala ndị gbara Tambora ọkụ. O juru ha anya mgbe ha huru ikuku nke uzuoku na uzu oku site na chaimni nke stratovolcano a. Ọ bụ ezie na ọ gbawara, ụmụ amaala a echegbubigaghị onwe ha ókè ebe ọ bụ na ọ bụghị oke egwu ọ bụ ogbunigwe ahụ.
Ọ bụbu Eprel 5, 1815, mgbe nke kachasị njọ. Thebọchị a ugwu ugwu gbawara site na oke ime ihe ike wee chụpụ iyi pyroclastic. A na-ewere ya dị ka ụdị mgbawa mgbawa na enwere ike ịnụ n ’ebe dị anya dị kilomita 1.400. Ugbua n'echi ya, ntụ na-agbọpụ ọkụ dara na mpaghara ọwụwa anyanwụ Java ma butekwa oke mkpọtụ n'ihi ihe mgbawa ahụ. Bọchị ise ka nke ahụ gasịrị, otu n'ime nhụsị kachasị njọ nke akụkọ ntolite mere. Ọ bụ otu n'ime ihe ike kachasị ike na akụkọ ntolite, na-agbasa ruo kilomita cubic 150 na ntụ na-eru kilomita 1.300 site na northwest.
Nke a bụ mgbawa na mmebi ya ihe dị ka mmadụ 60.000 nwụrụ. A maara ntoputa a dị ka otu n’ime ihe kacha njọ ebe ọ bụ na ọ ka njọ karịa nke ugwu ugwu Krakatoa nke mere n’afọ 1883. N’ime ụdị mgbawa a, ihe a kwapụtara ji okpukpu 100 karịa nke a. Otu o sila dị, ọtụtụ mmadụ tufuru ndụ ha ma osimiri ndị ahụ wee lie okporo osisi ndị kacha nso na ala ubi niile. Ihe omume a mere ka e guzobe nnukwu caldera nke na-adịgide ruo taa ma mee ka ugwu mgbawa ghara ịhapụ ogologo.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ugwu a bụ otu ihe kachasị mkpa n'ụwa nyere oke ike mgbawa ahụ mere na 1815. Enwere m olile anya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ugwu mgbawa Tambora na mgbawa ike ya dị egwu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Tambora ugwu mgbawa